လေနုအေး: သားအကြောင်း ဟိုတစ ဒီတစ
Posted by တန်ခူး at 10:48 AM
အစမို့ထင်တယ် သားက နောက်ဆို အဲ့ကျောင်းကလေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်လာလိမ့်မှာပါဗျ ။ သားသားအကြောင်းက မရိုးဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမှာ စာရေးကောင်းတဲ့ အမေတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုးး :)
နောက်လည်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ ရေးပါ မတန်ခူးရဲ့..
ကလေးက သူ့ဘာသာသူ ဒုက္ခရောက်နေတယ် ပြောတယ်ဆိုတော့ သနားလည်းသနား၊ ရယ်စရာလေးလည်းဖြစ်။
သားသားလေး အကြောင်းဖတ်သွားတယ် အစ်မ တန်ခူးရေ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရေးတာ အပြစ်မှ မဟုတ်ဘဲ။ ရေးချင်တဲ့စိတ်ရှိတာသာ ရေးပါ မတန်ခူးရယ်။ အမ ဘာရေးရေး ဖတ်လို့ကောင်းတာပဲ။ သားသားအကြောင်း လဲ သိချင်တာပဲ။
သူ သီချင်း ကြိုက်တတ်တာ ၀မ်းသာတယ်။ ဘာသီချင်းကြိုက်ကြိုက်၊ ဂီတကို ချစ်ရင် သူ့စိတ်ကလေး ဘယ်တော့မှ မခက်ထန်ဘူး။ မြန်မာ သီချင်းလေးတွေကိုတော့ နောင်ကျရင် ခံစားတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီချစ်စရာ မိသားစုလေး ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။
အမတန်ခူးရေ သားသားက ကျောင်းပျော်သွားမှာပါ။ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်။ အစဆိုတော့ သူလည်း အားငယ်တာနေမယ်။ သီချင်းတွေလည်း ဆိုတတ်နေပြီပေါ့။
တို.ကတော့ တန်ခူး ဘာရေးရေး စိတ်ဝင်စားတယ်.. စိတ်ကူးကောင်း အရေးကောင်းဆိုတော့ တန်ခူးရေးချင်တာသာ ရေး။ များများဖတ်ရလေ ကြိုက်လေပါပဲ။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် တန်ခူးရယ်.. တခါတလေ သူတို.ကျောင်းသွားပို့တဲ့အချိန် ကိုယ့်လက်ကိုဆွဲပြီး သနားစဖွယ် မျက်နှာလေးတွေနဲ့ သူတို.လေးတွေကို ထားပစ်ခဲ.ရတာ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။ နောက်တော့လည်း ပျော်သွားမှာပါ။ ကလေးပေါက်စလေးတွေ ကာကွယ်ဆေးထိုးသလိုပဲပေါ့။ သူတို.လေးတွေ အသားနာမှာ စိုးပေမယ့် သူတို.ကောင်းဖို.အတွက်ဆိုတော့...
ခေတ်ရေစီးကြောင်းကတော့ တားရတာ နဲနဲခက်မယ်ထင်တယ်နော်..။အိမ်က ကလေးတွေလည်း အဲလိုပဲ။ ဂီတကို ခံစားတတ်နေသေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေရတယ်။ သမီးငယ်ကလည်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆို သိပ်ကြိုက်ပဲ။
အမရေ- အမ့သားလေး တဖြေးဖြေးတော့ နေသားကျသွားမှာပါ၊ သူကအခုအရွယ်ဆိုတော့ သိတတ်နေပြီပေါ့၊ ညီမသားဆို ရက် ၅၀ ကတည်းက ကျောင်းပို့ ထားရတာ၊ အမေတယောက်ရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ စဉ်းစားသာကြည့်ပါ၊ မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့် ဆိုသလိုပေါ့၊ ဒီမှာတော့ အဲဒီလို လသား ရင်ခွင်ပိုက်ကို day care ကျောင်းပို့ တာ မထူးဆန်းပေမယ့် ကိုယ့်အဖို့ ကတော့ စွန့် စားရသလိုပါပဲ၊ မိတ်ဆွေတယောက်က ပြောတာတော့ အိမ်မှာကလေးထိန်းနဲ့ ၂ယောက်ထဲထားတာထက်စာရင် ကျောင်းပို့ ထားတာ ပိုစိတ်ချရတယ်ဆိုလို့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စိတ်ဖြေရပါတယ်၊
အမရေ နေ့လည်က ဖတ်မိလို့ အလုပ်ထဲမှ ခံစားနေရတယ်။ စီနီယာက မင်းနေကောင်းရဲ့လားဆိုမှ သတိထားမိတော့ မျက်ရည်ကကျနေပြီ။ အမရေးတော့ မိဘဖက်ကဆိုတော့ ကျနော်နားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိုခံစားမိတာပါ။ ပြန်ရေးထားတာလေး အမအချိန်ရရင် ဖတ်ပေးပါဦးအမ။
သားသားက ပျော်လာမှာပါ။ နောက်ဆို gf တွေဘာတွေတောင် ရလာဦးမယ် :P
အစ်မတန်ခူး သားလေး အကြောင်းရေးတာ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်ရေးလဲ ငြီးမှာ မဟုတ်ပါ။ ရေးပါနော်။ အားပေးတယ်။ သားကို မမြင်ဘူးဘဲနဲ့ ချစ်နေမိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းတော့ ကျောင်းပျော်လာ မှာပါ။ ပုံရိပ်လဲ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမတက် ချင်ဘူး။ ခဏခဏ ငိုတာ မှတ်မိတယ်။
အမရေ..သားအကြောင်းရေးတာကို ဖတ်ရတာ ရီလည်း ရီရ စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပေါ့.. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေမယ့် အမရေးထားတဲ့ သားအကြောင်းကတော့ ဘယ်တော့မှ ဖတ်ရတာ မရိုးဘူး.. နောက်ပြီး သားသားက ကျောင်းတက်ခါစမို့ စိမ်းနေသေးတာ ထင်ပါရဲ့ အမရယ်... နောက်တော့ အသားကျသွားမှာပါ။ အမက ရုံးနဲ့ နီးနီးနားနားဆိုတော့ သွားကြည့်လို့ရတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်.. :)
တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်း... ပျော်စရာကောင်း... စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်း... ရယ်လဲရယ်ရ... တန်ခူးရဲ့Stress ကိုလဲ သနား... ခံစားမှုပေါင်းစုံပေးနိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးပါ တန်ခူးရေ...
သားလေးက ကျောင်းစတက်ခါစမို့ ပါ။ တစ်ဦးတည်းသော ကလေးတွေက ကျောင်းပျော်ဖို့အချိန်သိပ်မစောင့်ရပါဘူး...။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ... တစ်ခုဘဲ စိတ်ပူရတာက ကျောင်းက ကျွေးတာတွေ သူ စားနိုင်သလား၊ စားရဲ့ လား ဆိုတာပါဘဲ...။
*** ဒါထက် စကားမစပ်... ဟွန့် .. ပြောပုံကိုက...
သူများရဲ့စိုင်းစိုင်းကိုများ ဆောင့်ဆောင့် အောင့်အောင့်နဲ့တဲ့ ...။
တန်ခူးနော်.. တန်ခူး... ဒုတ် ဒုတ်...။
သားအကြောင်းက ဟိုတစဒီတစပေမဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းသအေ့
အစ်မကတော့ မခံစားနိုင်လို့ အလုပ်ထွက်မလုပ်ပဲ သူတို့နားရှိနေပေးရုံလေး နေပေးတယ်။ (သူဖာသာအပျင်းကြီးနေပြီးတော့ လို့ ဆိုတာတွေကို ကျောခိုင်း၍ပေါ့...)
ဆိုလိုချင်တာကတော့ ငွေကြေးဆိုတဲ့ ကြားခံပေါ်လာပေမဲ့လည်း တို့တွေဟာ တစ်ခုကို တစ်ခုနဲ့ လဲနေရသေးတဲ့ အခြေမှာပါ။
အစ်မကြီး ကျနော် email ပို့လိုက်တာ ရောက်လားဗျ လိပ်စာမှားသွားလား မသိ ။
မတန်ခူးရေ ... ကွန်မန့် မရေးဖြစ်ပေမဲ့ အမြဲ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် ဂီတကို ခံစားတတ်တဲ့ သားလေးက မြန်မာဂီတကိုလည်း နှစ်သက်မှာပါ။ သူ့အရွယ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ လတ်တလော သူ့စိတ်ထဲ သူ့နားထဲမှာ တိုးဝင်လာတဲ့ ဂီတကို စွဲလမ်းမိတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မလည်း အသက်ကြီးမှ မြန်မာဂီတကို ခံစားတတ် နှစ်သက်တတ်လာတယ်။ ခေတ်ပေါ် ဂီတတွေလဲ ကြိုက်နေတုန်းပဲ။
သားလေးကို ကျောင်းပို့ရတာ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ... ။ နောက် ... သူနေသားကျသွားမှာပါ။ အစဆိုတော့ ဒီလိုပဲပေါ့။
ကျွန်တော့် အစ်ကိုကြီးတွေတော့ အခု ၄၀ နီးနေပြီ။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဆိုရင်တော့ စိုင်းထီးဆိုင် စိုင်းဆိုင်မောဝ်နဲ့ ငြိမ့်နေတာများတယ်။ သူတို့ ကလေးတွေနဲ့ အတူတူ ဆိုရင်တော့ ဟစ်ဟော့ပ်တွေ ရောသမမွှေတွေ လုပ်နေကြတာပဲ။
နော်နော်ကို မူကြိုပို့ တုန်းကလဲ ဒီလိုဘဲ..ငိုမှငို။
သူ့ အမေဘဲ ကျောင်းပို့ မှရတာ..
ကျနော်နဲ့ ဆို ပို့ ပြီးလို့နော်နော် မျက်ရည်ဝဲတာနဲ့ 
“ ကဲ...လာ သား တို့ ပြန်ကြမယ်ကွာ” ဆိုပြိး...
မဒမ်ဆူးက ကျနော်နဲ့ ကျောင်းမပို့ ခိုင်းရဲဘူး...
ပါတ်ဝန်းကျင်သစ်၊ နေရာသစ်မှာ ကလေးတေါ အရမ်းအားငယ်တတ်တာ၊ လွမ်းတတ်တာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်..။
သားသား ကျောင်းမှာ မြန်မြန် ပျော်ပါစေ...။
စိတ်မရှိပါနဲ့ တိတိတိတ်လေးဖတ်ပီး ပြန်နေတာကိုနော်
သမီးတုန်းကလည်း အိမ်မှာ အဖွားရှိပေမယ့် သက်တူရွယ်တူကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းတတ်အောင်၊ ဆော့တတ်အောင် ကျောင်းကို တကူးတက ပို့ပေးရတယ်။ ပညာလည်း တတ်တာပေါ့။
I amaregular reader of you blog but I never write any comment. We like your posts so we love to read all including your personal life expecially about your lovely son.
He will be adaptable and happy soon in his school.
Carrry on, sister.
အမပိုစ့်တွေကို အမြဲဝင်အားပေးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တွေဆို အမရဲ့ သားသားအကြောင်းအမြဲဝင်ဖတ်တယ်။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် စိတ်ညစ်နေတုန်းအမသားသားကိုဖတ်တယ်ဆိုလို့။ အပြစ်ကင်းတဲ့အမသားသား ရဲ့ အပြူအမူတွေကို သဘောကျလို့ပါ။